Management Archives - Business Centric Network (BCN)
Business, Change, Management
September 25, 2018 September 24, 2018 San Thida
Business Process Re-engineering Re-think: Examine how the current organization of work and jobs affects customer satisfaction and service. Re-design: Analyze how jobs are put together, the workflow, and how results are achieved; then re-design the process as necessary. Re-tool: Look at new technologies (equipment, computers, software, etc.) as opportunities to improve productivity, service quality, and… Continue reading Business Process Re-engineering
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မိမိ တို့ကိုယ်တိုင် မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်နိုင်ရေးအတွက် အရေးကြီးသော မေးခွန်း(၃) ခု
September 15, 2018 September 18, 2018 San Thida
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မိမိ တို့ကိုယ်တိုင် မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်နိုင်ရေးအတွက် အရေးကြီးသော မေးခွန်း(၃) ခု ၁) “Who do we want to be?” ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်ချင်ကြသလဲ။ ၂) “What are we great at?” ကျွန်တော်တို့ ဘယ်နေရာမှာ အားသာလဲ။ ၃) “What will we be uniquely advantaged at doing?” သူများနဲ့ မတူပဲ အားသာချက် ရအောင်လုပ်ရမည့် အရာကဘာလဲ။ *** စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား မိမိ တို့ကိုယျတိုငျ မှနျကနျစှာ သုံးသပျနိုငျရေးအတှကျ အရေးကွီးသော မေးခှနျး(၃) ခု ၁) “Who do we want to… Continue reading စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မိမိ တို့ကိုယ်တိုင် မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်နိုင်ရေးအတွက် အရေးကြီးသော မေးခွန်း(၃) ခု
Tagged Culture, Organization, Strategic ManagementLeaveacomment
Micro Managing လား??? ================== ဒူဘိုင်းရဲ့ စော်ဘွားကြီးဟာ အမျှော်အမြင်ကြီးလှပါတယ်။ တစ်နေ့ သူ့ရဲ့ အစိုးရအရာရှိကြီးတွေကို အခမ်းအနားနဲ့ဖိတ်ပြီး လမ်းညွှန်ချက်ပေးခဲ့ပါတည်။ သူ့ရဲ့ အစိုးရလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ paperless ဖြစ်တဲ့ Smart Government ဖြစ်အောင် ခိုင်းစေပါတယ်။ ထပ်ပြောလိုက်သေးတယ်။ ၂ နှစ်ပြည့်လို့မှ အကောင်အထည်မပေါ်ရင်တော့ မင်းတို့ကို အငြိမ်းစားယူပွဲလေး လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ခပ်ပြုံးပြုံးလေးပြောလိုက်ပေမယ့် အတည်ပြောနေတာဆိုတာ အရမ်းသိသာပါတယ်။ နောက်နေ့တွေမှာ ဌာနပေါင်းစုံက လူကြီးတွေက သတင်းစာတွေထဲမှာ ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်နဲ့ ဆင်ဖမ်းမယ် ကျားဖမ်းမယ်တွေလုပ်ကြတာပေါ့။ စော်ဘွားကြီးက ဘာမှ မပြောသေးဘူး။ ကြည့်နေတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူတွေက သွေးအေးလာပြီး paperless Smart Government အိပ်မက်က natural death ဖြစ်သွားပါတယ်။ သိပ်မပြောကြပါဘူး။ ဒီအခါမှာ စော်ဘွားကြီးက လူတွေသွေးအေးသွားတာကို… Continue reading Micro Managing???
Tagged MicroLeaveacomment
Summary of Six Purposes ofaPerformance Management System.
February 16, 2018 San Thida
Summary of Six Purposes ofaPerformance Management System. Strategic: It links the organization’s goals with individual goals, thereby reinforcing behaviors consistent with the attainment of organizational goals. Administrative: It isasource of valid and useful information for making decisions about employees, including salary adjustments, promotions, employee retention or termination, recognition of superior performance,… Continue reading Summary of Six Purposes ofaPerformance Management System.